Umgomo Wobumfihlo - Abasebenza Izigidi
Sicela uthole ngezansi Inqubomgomo Yemfihlo yakamuva ye-MillionMakers.com ("Inqubomgomo Yobumfihlo").
Inhloso Yenqubomgomo yethu Yobumfihlo ukuchaza ngokucacile ngamagama alula nangendlela emfushane, esobala futhi ebonakalayo, ukuthi siyiphatha kanjani idatha yakho yangasese. Imininingwane yomuntu siqu ingatholwa ngohlaka lokulethwa kwensiza, inqubo yokukhetha, ukutholwa kwensizakalo enikezwe nguwe noma uma siphatha le datha lapho uvakashela iwebhusayithi yethu. Inqubomgomo yethu iqinisekisa ukuphepha kwamalungelo akho, imfihlo nokuvikeleka kwemininingwane osinike yona, ngokuya ngezibopho zomthetho ezisebenza ngokuqondene nokuvikelwa kwemininingwane yomuntu uqobo futhi ikakhulukazi, ngokuhambisana nesibopho sobala. Esimweni esingafani nalutho, singasebenzisa idatha yakho yomuntu siqu ekusebenziseni noma ekuvikeleni ilungelo ezimeni zomthetho.
Singabelana NgeDatha Yakho Yomuntu Nge
Izinkampani Zethu Zeqembu.
Ukuphathwa Komphakathi kanye Nezinhlangano lapho intela, abasebenzi, ezokuphepha komphakathi noma eminye imithetho esebenzayo idinga lokho.
Abaqashi abangaba khona, izinhlangano zokuqasha, ophathina bezinkampani zangaphandle, amabhodi wezaziso zomsebenzi kanye nabahlanganisi bamathuba amathuba emisebenzi ukwandisa amathuba akho okuthola isikhundla somsebenzi esifanele.
Izinkampani ezibhekele ukucubungula idatha, njengabahlinzeki abanikezela ngezinsizakalo kithi njengabeluleki bangaphandle nabeluleki abaqeqeshiwe, abameli, abacwaningi mabhuku, ama-accounting, amabhange / izikhungo zezezimali, ochwepheshe bamakhompiyutha, abameli bokufika, abahloli bezitifiketi, iziqu kanye necala lobugebengu lapho kuvela futhi uvumelane nomthetho.
Ukudluliswa kwedatha yamazwe omhlaba nakho kungathatha indawo yezenzo zangaphambilini esizolandelwa ama -apps kuzo, amaContractual Clause ajwayelekile ahunyushwe yiKhomishini yaseYurophu kanye ne-EU-USA Privacy Shield yokuqinisekisa lokho kudluliselwa okwenziwe emazweni angenasinqumo esanele kusuka kuKhomishini yaseYurophu. Kunoma ikuphi, abantu besithathu ekwabelwaniwe naye imininingwane ethile yomuntu siqu bayobe bakuqinisekisile ngaphambilini ukwamukelwa kwezinyathelo zobuchwepheshe nenhlangano ezanele ekuvikelweni okuyikho.
Ukudalulwa kwenziwa yithi ngasese noma ngenye indlela ngokuya ngomthetho. Sithatha izinyathelo ezifanelekile ezimweni zokuqinisekisa ukuthi noma yimuphi umuntu wesithathu esiveza imininingwane yakhe naye uphatha imininingwane yakho ngokuya nge-GDPR kanye ne-Umthetho Wobumfihlo.
Ukuvikelwa kwemininingwane yakho
Sithatha izinyathelo zobuchwepheshe nezenhlangano ezidingekayo ukuze kulondolozwe izinga elidingekayo lokuphepha nobumfihlo maqondana nedatha yomuntu uqobo esetshenzisiwe futhi ngokufanayo, sibeke inqubo edingekayo ukuze sigweme okusemandleni ethu, ukusetshenziswa okungafanele, ukufinyelela okungagunyaziwe, ukuguqulwa okungekho emthethweni, ukususwa kanye ukulahleka kwemininingwane
Le nqubomgomo yobumfihlo isebenza ku www.millionmaker.com, okuphethwe futhi kusetshenziswe yi-MM LLC. Le nqubomgomo yobumfihlo ichaza ukuthi siqoqa futhi sisebenzise kanjani imininingwane yomuntu siqu oyinikeza kuwebhusayithi yethu. Ibuye ichaze izinqumo ongazifinyelela maqondana nokusebenzisa imininingwane yakho, nokuthi ungafinyelela kanjani futhi uvuselele lolu lwazi.
1. Ukuqoqwa kwemininingwane nokusetshenziswa
Siqoqa imininingwane yakho elandelayo kusuka kuwe.
Imininingwane yokuxhumana, efana negama lakho, ikheli le-imeyili, ikheli le-imeyili nenombolo yocingo.
Imininingwane yokukhokha, ikheli lokuhlala nekheli lokukhokhisa.
Imininingwane mayelana nebhizinisi lakho, njengegama lenkampani, ikheli, uhlobo lwebhizinisi kanye nomnikazi / abazuzi.
Imininingwane efakwe nguwe yesayithi likaJobe, eyahlukaniswa, yokuxhumana nomphakathi, ingcebo, nezinye izinsizakalo ziyindaba yokuzikhethela kwakho futhi asizibandakanyi.
Singaqoqa imininingwane yomuntu wesithathu lapho ungeza amagama omthengi, umthengisi, umhlinzeki ngezinsizakalo, abaninimasheya noma abahlomulayo kumafomu ethu oku-oda. Ukuqoqwa kolwazi lomuntu siqu oluhlonza umuntu wesithathu kungahle kudingekile ukucubungula futhi kubhalise i-oda lakho lemikhiqizo noma izinsizakalo ezithile. Ngeke sisebenzise lolu lwazi nganoma iyiphi enye injongo yokuthengisa. La maqembu esithathu angaxhumana nathi ku- info@millionmaker.com ukusicela ukuthi sisuse lolu lwazi kusuka database yethu.
Sisebenzisa imininingwane esiyiqoqayo ku:
Gcwalisa i-oda lakho.
Ukuthumela isiqinisekiso se-oda.
Hlola izidingo zebhizinisi lakho ukuthola imikhiqizo efanelekile.
Sithumela umkhiqizo noma imininingwane oyicelile.
Phendula izicelo zamakhasimende.
Thumela wena ukuxhumana.
Yenza ngenkuthalo efanele.
Phendula okukukhathazayo nemibuzo.
Sizokwabelana ngemininingwane yakho yangasese nabantu besithathu ngezindlela ezichazwe kule nqubomgomo yobumfihlo. Asilokothi sithengise imininingwane yomuntu siqu yeklayenti lethu kunoma yimuphi umuntu wesithathu.
Singanikeza imininingwane yakho ezinkampanini ezihlinzeka ngezinsizakalo ezisisiza ngemisebenzi yethu yebhizinisi (ngokwesibonelo; ukucubungula i-oda / ukukhokha kwakho, izinsizakalo zokufika kwamanye amazwe, isevisi yama-visa, izimvume zomsebenzi, ukubonisana ngezemfundo, ukuthenga / ukuthengisa ibhizinisi elikhona, ukubhalisa ibhizinisi lakho, ukulayisensa, ukuvula i-akhawunti yasebhange, ukukhishwa kwe-akhawunti noma ukuhlinzeka ngamakhasimende). Lezi zinkampani zigunyaziwe ukusebenzisa imininingwane yakho kuphela uma kunesidingo ekunikezeleni lezi zinsizakalo.
Amanye amakhasi ethu asebenzisa “amasu wokuhlela” ukusebenzela okuqukethwe nokubuya kubahlinzeki bethu bezinsizakalo (njengeprosesa yokukhokha) ngenkathi kugcinwa ukubukeka nokuzizwa kwaleli sayithi. Sicela wazi ukuthi unikezela ngemininingwane yakho yangasese kulaba bantu besithathu hhayi ukuthi www.millionmaker.com.
Singadalula nemininingwane yakho:
Njengoba kudingwa ngumthetho, njengokuhambisana ne-subpoena, noma izinqubo zomthetho ezifanayo.
Lapho sikholwa, ngokweqiniso, lokho kudalulwa kuyadingeka ukuvikela amalungelo ethu, ukuvikela ukuphepha kwakho noma ukuphepha kwabanye, ukuphenya inkohliso noma ukuphendula isicelo sikahulumeni.
Uma sibandakanyeka ekuhlanganisweni, ekutholeni noma ekuthengisweni kwakho konke noma engxenyeni yezimpahla zethu (lapho uzokwaziswa nge-imeyili kanye / noma ngesaziso esivelele kuwebhusayithi yethu nganoma yiluphi ushintsho kubunikazi noma ekusebenziseni imininingwane yakho , kanye, noma yikuphi ukukhetha ongaba nakho mayelana nemininingwane yakho).
Kunoma yimuphi omunye umuntu, ngemvume yakho yangaphambili.
Sizimisele ukuhlinzeka ngezinga eliphezulu kakhulu lezokuphepha nobumfihlo. Zonke izinto ezenziwa ku-inthanethi, kufaka phakathi ukucubungula izinkokhelo zekhadi lesikweletu, kwenziwa ngokuphepha kusetshenziswa ubuchwepheshe, kusekelwa isiphequluli sakho, esibeka yonke imininingwane ethunyelwe kithi. Sithatha konke ukuqapha ukuvikela imininingwane yakho ekulahlekelweni, ekukhululweni, ukufinyelela okungagunyaziwe, ukusetshenziswa kabi, ukuguqulwa noma ukubhujiswa futhi sigcina imininingwane yomuntu siqu kuphela ngezinhloso osinike zona.
Isitatimende se-GDPR (General Data Protection Regulation)
Ukuvikela imininingwane yakho eyigugu, yonke idatha egcinwe kulwazi lwethu, okungaxhunyiwe ku-inthanethi noma okungaxhunyiwe ku-inthanethi, izovikelwa ngokuya nge-GDPR ye-EU (General Data Protection Regulation Link to the European Union law), eqala ukusebenza ngokugcwele ngoMeyi 25, 2018.
I-MM LLC ayiqoqi futhi icubungule idatha ngaphandle kokuthi inikelwe nguwe ngokuzithandela. Siyathembisa ukulandela ngokuqinile amazinga wokuphepha nobumfihlo emhlabeni jikelele.
Sithumela wena kuphela ulwazi olufanele kakhulu Ezinsizeni Zokufika, Amasethingi Ezemfundo, Izinsiza Ezihlanganisiwe, Ukukhokhiswa Kwentela Nokuhlola, Amathuba webhizinisi, othathwe ngesandla yiqembu lethu labazinikele, abangabantu ababonga ubumfihlo bemininingwane yomuntu siqu.
4. Ukulandela ubuchwepheshe / amakhukhi
Ikhukhi yifayela lombhalo elincane eligcinwe kwikhompyutha yomsebenzisi ngenhloso yokugcina amarekhodi. Sisebenzisa amakhukhi kusayithi lethu. Asixhumanisi imininingwane esiyigcina kumakhukhi nanoma yiluphi ulwazi olukhomba wena uqobo oluthumela ngenkathi ukulesi siza.
Sisebenzisa amakhukhi we-ID yeseshini namakhukhi aqhubekayo ukulandela indlela yokuziphatha komsebenzisi nokugcina imininingwane oyifaka kumafomu ethu. Ikhukhi le-ID leseshini liyaphela lapho uvala isiphequluli sakho. Ikhukhi eliphikelelayo lihlala kwi-hard drive yakho isikhathi eside. Ungasusa amakhukhi aqhubekayo ngokulandela izinkomba ezinikezwe kumkhombandlela wesiza sakho sosizo se-inthanethi. Uma wenqaba amakhukhi, usengayisebenzisa le sayithi, kodwa amandla akho okusebenzisa ezinye izindawo zesayithi lethu azokhawulelwa.
Ukuqondiswa kokuqondisa / ukuqondisa kabusha
Sisebenzisana inethiwekhi yezikhangiso ezivela eceleni ukuze sikhombise ukukhangisa esizeni sethu noma ukuphatha ukukhangisa kwethu kwamanye amasayithi. Umlingani wethu we-ad-network usebenzisa amakhukhi nama-web beacons ukuqoqa imininingwane engabonakali uqobo mayelana nemisebenzi yakho kuwebhusayithi yethu namanye amawebhusayithi, ukukunikeza ukukhangisa okuqondisiwe okususelwa kwizintshisekelo zakho.
Ama-web beacons / gifs
Sisebenzisa ubuchwepheshe be-software obubizwa ngokuthi ama-clear gifs (ama-web beacons) ukusisiza ukuphatha kangcono okuqukethwe kuwebhusayithi yethu ngokusazisa ukuthi yikuphi okuqukethwe okusebenzayo. Sula ama-gif imidwebo emincane enesihlonzi esihlukile, esifana nokusebenza kwamakhukhi futhi asetshenziselwa ukulandela ukuhamba kwe-inthanethi kwabasebenzisi bewebhu. Ngokuphambene namakhukhi, agcinwa kwi-hard drive yekhompiyutha yomsebenzisi, ama-gifs acacile afakwa ngokungabonakali emakhasini ewebhu futhi alingana nositopishi ekugcineni kwalo musho. Asihlanganisi imininingwane eqoqwe ngama-gifs acacile kulwazi olukhonjwa ngamakhasimende ethu.
Ama-analytics / log file
Siqoqa imininingwane ethile ngokuzenzakalelayo futhi siyigcina kumafayela e-log. Lolu lwazi lufaka ikheli lakho le-inthanethi ye-protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, umhlinzeki wesevisi ye-inthanethi (ISP), amakhasi okubhekisa / ukuphuma, isistimu yokusebenza, isitembu sosuku / isikhathi, kanye nemininingwane yokuchofoza.
Sisebenzisa lolu lwazi, olungakhombisi abasebenzisi abathile, ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isiza, ukulandelela ukunyakaza komsebenzisi ezungeze isayithi lethu futhi siqoqe imininingwane yabantu mayelana nesisekelo sabasebenzisi sonke. Asixhumanisi le datha eqoqwe ngokuzenzakalelayo imininingwane engabonakala uqobo.
Ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokulandela umkhondo ngabanikezeli bethu bezinsizakalo, ophathina kwezobuchwepheshe noma ezinye izimpahla ezivela eceleni esizeni sethu (njengalezo ezibandakanyekile ekulandeleleni ukuphumelela kokukhangisa) akumbozwe yile nqubomgomo yobumfihlo. Lawa maqembu wesithathu angasebenzisa amakhukhi, ama-gifs acacile, izithombe nemibhalo ukubasiza ukuphatha kangcono okuqukethwe kwabo kuleli sayithi. Asinakho ukufinyelela noma ukulawula phezu kwalesi buchwepheshe. Asibophisi imininingwane eqoqwe yilawa maqembu esithathu emininingwane yamakhasimende ethu noma yomsebenzisi.
Ukuphepha kwemininingwane yakho yangasese kubaluleke kakhulu kithi. Uma ufaka imininingwane ebucayi (efana nekhadi lesikweletu, i-akhawunti yasebhange noma imininingwane yebhizinisi lokuphathelene) emafomu ethu oku-oda, sibhala ngemininingwane yokuhanjiswa kwalolo lwazi sisebenzisa ubuchwepheshe obusebenzayo bobuchwepheshe (SSL).
Silandela izindinganiso ezamukelwa ngokuvamile ukuvikela imininingwane yomuntu siqu engeniswe kithina, kokubili ngesikhathi sokudlulisela futhi lapho sesiyitholile. Noma kunjalo, ayikho indlela yokudlulisa nge-Intanethi noma indlela yokugcina nge-elekthronikhi, evikelekile eyi-100%. Ngakho-ke, ngeke sikwazi ukukuqinisekisa ukuphepha okuphelele. Uma unemibuzo mayelana nokuphepha esizeni sethu, ungaxhumana nathi nganoma info@millionmaker.com.
6. Imininingwane eyengeziwe
Izixhumanisi kumasayithi avela eceleni
Lesi siza sifaka izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi imikhuba yawo yobumfihlo engahluka kweyethu. Uma ufaka imininingwane yakho kunoma yiliphi lalawo masayithi, imininingwane yakho ilawulwa izinqubomgomo zobumfihlo zabo. Sikukhuthaza ukuthi ufunde ngokucophelela inqubomgomo yobumfihlo yanoma iyiphi iwebhusayithi oyivakashelayo.
Iwebhusayithi yethu ifaka phakathi imithombo yezokuxhumana (ngokwesibonelo, i-facebook, i-twitter, njll. Lezi zici zingaqoqa ikheli lakho le-IP nokuthi yiliphi ikhasi olivakashelayo kule sayithi, futhi lingasetha ikhukhi ukunika amandla isici ukuthi sisebenze kahle. Izici zokuxhumana nabantu namawijethi kungabanjelwa umuntu wesithathu noma kubanjwe ngqo kuwebhusayithi yethu. Ukusebenzisana kwakho nalezi zici kulawulwa yinqubomgomo yobumfihlo yenkampani ebanikezayo.
Singakhombisa ubufakazi bomuntu siqu bamakhasimende anelisekile, ngaphezu kokunye ukuvumelana, esizeni sethu. Lobu bufakazi butholakala kumhlinzeki wesevisi wesithathu, ongacela imininingwane yakho, kubandakanya negama lakho nekheli le-imeyili. Noma singathumeli imininingwane ekhonjwayo uqobo kuleli sayithi, uma ufisa ukubuyekeza noma ucishe ubufakazi bakho, sicela uxhumane nesilawuli sedatha.
Izinguquko kule nqubomgomo
Singavuselela le nqubomgomo yobumfihlo ukukhombisa ushintsho ezindleleni zethu zolwazi. Uma senza noma yiluphi ushintsho lwezinto ezibonakalayo, sizokwazisa ngesaziso esikuleli sayithi ngaphambi koshintsho olusebenza. Sikhuthaza ukuthi ubuyekeze leli khasi ngezikhathi ezithile ukuthola imininingwane yakamuva ngemikhuba yethu yobumfihlo.
Qaphela * Njengenqubomgomo, asabelani noma sithengise idatha yeklayenti lethu nanoma yimuphi umuntu wesithathu, kuze kube futhi ngaphandle kokuthi insizakalo ekhethiwe icutshungulwe ngozakwethu, abangane, abahlinzeki bensizakalo. Imininingwane yakho igcinwa iyimfihlo ngokuqinile njengenqubomgomo yethu Yobumfihlo.